Misoro yeNhau, Chishanu, Chivabvu 13, 2022
Mukuru wemapurisa, Commissioer-General Godwin Matanga vanodzika mutemo unorambidza mapurisa kushandisa simbi dzinokandwa nemapurisa dzichiboora mavhiri edzimotokari dzinenge dzave kutiza, kana kuti hand-held spikes, zvichitevera kuchemachema kweveruzhinji pamwe nenhengo dzeparamende.
Dare repamusoro reHigh Court rinobvuma chikumbiro chevana vevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu VaRobert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa vavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre.
Vagari vekwaChivi nekuMwenezi vokumbira rubatsiro rwechikafu sezvo vatarisana nenzara nekuda kwegoho risina kuita zvakanaka mwaka uno, dzimwe mhuri dzichiti dzave kumanikidzwa kudya kamwechete pazuva nekuda kwekukwira kwemitengo yezvekudya.
United Nations inoti Protais Mpiranya uyo ange achitsvagwa nemhosva dzekuponda vanhu muRwanda muna 1994 ainge akahwanda muZimbabwe nguva yose iyi achinzi aitodyidzana nehurumende kusvika azoshaya muna 2006.
Vamwe vagari vekwaZvimba neMhangura vanoti vari kutadza kuwana mashoko neruzivo munzvimbo dzakavhurwa nehurumende makore mashanu adarika kana kuti Community Information Centres nekuda kwekunetsa kwemasaisai uye kudhura kwemari dzekutenga masaisai aya.
Mapurisa anoyambira kuti achasunga vese vachakonzeresa mhirizhonga kumutambo wenhabvu we “Battle For Zimbabwe” uchange uri pakati paHighlanders neDynamos muBarbourfields neSvondo.
Muchirongwa chedu LiveTalk na8 pm nhasi, tiri kuenderera mberi nekutarisa matanho akaziviswa nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa mukupera kwesvondo akanangana nekudzikamisa hupfumi hwenyika.